Kani waa maqaal ku saabsan Halbeega awooda socota. Qaab adeegsi kale, eeg Xawaare (faah faahin).
Xawaare (Af-Ingiriis: Speed; Af-Carabi: سرعة) waa halbeegga lagu ogaado orodka awoodda socota ee shay, aalad ama walax ku socoto waqti kooban gudaheed. Si la mid ah halbeegyada dhererka, balaca iyo jooga ayaa masaafada xawaaraha loo qeybiyaa waqtiga.
Halbeega Degreega[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 01:42, 14 Diseembar 2015.